Yini eyenza abashadile baqhelelane futhi kube namanga emishadweni eminingi eyehlulekile.
Izindlela zokukusiza ukuthi unqume ukuthi ngabe umuntu ukufanele yini—ngaphambi kokuba ukuqale ubudlelwano noma umshado.
Amathuluzi ongawasebenzisa ukubuyisa ukuxhumana phakathi kwendoda nenkosikazi—ukwakha umshado ojabulisayo, owanelisayo nozohlala njalo.
Lapho ngaphambili umndeni wawuyisisekelo esizinzile lapho konke okunye kwakwakhiwe phezu kwakho, namuhla izinsalela zawo eziphukile zingumthombo wokuningi okuhlupha umphakathi. Futhi ngenkathi imishado isadlula izehlukaniso, igebe livaleka ngokushesha. Umshado usendleleni yokuba isikhungo esihlulekile.
U-L. Ron Hubbard ubhale kakhulu ngobudlelwano phakathi kwabantu futhi okuningi kwakho kuyasebenza kulobu budlelwane bomuntu qobo. Kulesi sifundo uzothola izindlela zokwenza umshado usebenze, kungani imishado eminingi yehluleka, ukuthi ungathola kanjani ukuthi abalingani bayafanelana yini nokuthi ungawonga kanjani umshado ohlulekayo.
Ngenkathi omagazini bethu begcwele izeluleko zodokotela bengqondo be “pop,” lo mkhuba uye wanda kakhulu. Nazi izixazululo zangempela—izixazululo ezisebenzekayo—ezingasetshenziswa ukwenza ngcono noma yibuphi ubuhlobo obuseduze.
Amahora amane kuya kwamahlanu. Kodwa ke, ungasenza le sifundo ngejubane lakho. Ngamanye amagama, akwanele. Isifundo lesi siyinsizakalo yethu kuwe, mahhala.
Lapho sekuqediwe Isifundo se-Umshado, uzothola isitifiketi nge-email.
"Isifunfo Somshado saba neqhaza elikhulu ekusizeni mina nomyeni wami ukuba siqondane, ngokufunda ukuhloniphana, ukukhombisa ukwethembeka nokuthembana, nokukhuluma uma sicasukile futhi singafukami intukuthelo.
“Besiseceleni kokwehlukana, sicabanga ukuthi ayikho indlela yokulungisa umonakalo. Enye yezinto esintuleka ngazo ngokwesiko lase-Afrika ukuxhumana, njengoba umyeni ehlala ephethe futhi elungile kuzo zonke izici. Ngokwesiko lethu, amadoda ayabusa, abesifazane banamahloni okuveza imizwa yabo, futhi ezimweni eziningi lokhu kuholela kwi-divorce. Asinabo abeluleki bemishado ukulungisa imishado.
“Ngibonga kakhulu Kwisonto le-Scientology. Njengoba sengiyifundile le ncwajana, ngiye ngafunda futhi ngaqonda ukuthi umshado uyisisekelo sobumbano bomndeni. ”
“Ngesikhathi ngibhekene nezinselelo emshadweni wami, ngangicabanga ukuthi ngizo-divorvce ngaze ngathola Amavolontiya Ministers ku-online Ukuphila kwami kwakunzima kakhulu, futhi angikaze ngibe nezikhathi ezijabulisayo nomyeni wami.
“Ekwenzeni isifundo Somshado ngiphinde ngazitholela futhi amandla ami evuselelwe. Ngizithole sengikwazi ukukhuluma nabantu abanezinkinga emshadweni nokuba ngumeluleki ngokubanikeza imininingwane (izincwajana). Okwamanje ngiqala ukwaba imininingwane ngazithola sengifuna ukushada ngingakahlukanisi futhi ngabona ukuthi izinkinga zingaxazululwa futhi abantu bangaqala impilo entsha ngemuva kokubhekana nezikhathi ezimbi lapho benikezwa imininingwane edingekayo ukuxazulula ukungaboni ngaso linye kwabo.
“Ukushada kuyinto ehloniphekile futhi ngokuxhumana uzoba nomshado ohamba phambili. Bengingomunye wabantu abangakwazi ukukhuluma kahle kodwa ngibonga Ongqongqoshe abangamavolontiya ngezinto ezikhuthazayo, uma ubalandela uzophinde uzithole.
Akukho okungenzeki emshadweni inqobo nje uma unolwazi Logqongqoshe Bamavolontiya. Ngingumuntu omusha futhi oseshintshile nabanye abangane bami ababenezinkinga ezifanayo sebeqala ukwazisa nemishado yabo.